Global Voices teny Malagasy » Olana goavana ny fako plastika ao Oganda · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jona 2018 5:47 GMT 1	 · Mpanoratra James Propa Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Oganda, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
Nankalazaina tamin'ny 5 jona ny Andron'ny Tontolo Iainana Manerantany , toy ny fanao isan-taona hatramin'ny taona 1974. “Reseo ny fandotoana Plastika” no lohahevitry ny taona 2018 – antso manokana hanaovana hetsika any Oganda, izay mahazatra loatra ny olona ny manary ny tavoahangy sy ny harona plastika eny an-dalambe.
Noezahana norarana ny harona plastika  (fantatra amin'ny anarana kaveera) tao Ogandà, saingy tsy nahomby ny fampiharana ity fandrarana ity noho ny tsindrin'ny mpanamboatra, ny tsy fitovian-kevitra teo amin'ny mpanao politika ary ny tsy fisian'ny fanentanana momba ny filàna izany.
Tamin'ity taona ity, nandritra ny Andron'ny Tontolo Iainana Manerantany, nanome baiko ireo orinasa mpamboatra harona plastika miisa 45  ny Filoha Yoweri Museveni mba hampitsahatra ny fanamboarana ny harona polyéthylène, mbola nanao ezaka hatrany izy mba hanamafisana ny fandraràna. Mbola ho hita eo raha toa ka handaitra izany amin'ity indray mitoraka ity.
Mety hanakana ny fikorianan'ny rano maloto ny fako plastika ao Kampala, renivohitr'i Oganda sady tanàna lehibe indrindra. Nanao ezaka tamin'ny fanomezana fanariam-pako teny an-dalambe ny Manampahefanan'ny Renivohitra Kampala (KCCA), nanao fanangonana fako matetika, ary nandrisika ny fanodinana ny plastika tamin'ny alalan'ny fanasoniavana  ny fifanarahana tamin'ny Coca Cola mba hampitomboana ny vola azon'ny olona amin'ny fanangonana fako plastika, ho 0,05$ hatramin'ny 0,13$ isan-kilaograma.
Nanao ezaka ihany koa ny tsirairay mba handresena ny fako plastika. Ohatra, tamin'ny taona 2017 nampiseho ny tanora mpandraharaha  roa izay nanangona fitaovana plastika ary namadika izany ho biriky fananganan-trano ny CGTN Africa  .
Tsy ny plastika ihany no fototry ny olana ho an'ny tontolo iainana ao amin'ny firenena. Ny fitrandrahana fasika  manamorona ny Farihin'i Victoria ohatra dia mampidi-doza ny zava-mananaina anaty rano satria mampiasa ny fasika ho toeram-ponenany  sy ho toeram-panatodizany ny trondro . Mitahiry ny rano ihany koa ny tany mando ary miady amin'ny tondradrano. Mbola maro ny asa miandry an'i Oganda amin'ny fiarovana ny tontolo iainana maharitra sy mahasalama ho an'ny olom-pireneny rehetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/19/121299/
 Andron'ny Tontolo Iainana Manerantany: https://www.unenvironment.org/events/un-environment-event/world-environment-day-2018
 norarana ny harona plastika: http://www.monitor.co.ug/News/National/Ban-kaveera-starts-tomorrow-NEMA/688334-2684690-151yi4z/index.html
 nanome baiko ireo orinasa mpamboatra harona plastika miisa 45: http://allafrica.com/stories/201806060155.html
 nampiseho ny tanora mpandraharaha: https://www.youtube.com/watch?v=VHrmTM-hftI&feature=youtu.be
 fitrandrahana fasika: http://www.monitor.co.ug/artsculture/Reviews/Sand-mining-in-Lwera--The-dark-side-and-bad-deals/691232-3399554-gmfb9qz/index.html